कस्ता व्यक्ति बढी क्यान्सरको जोखिममा ? | NewsSudur
कस्ता व्यक्ति बढी क्यान्सरको जोखिममा ?
क्यान्सर शरीरका विभिन्न भागमा हुन सक्छ । जस्तै छालाको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, रक्त क्यान्सर, कोलन क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर आदि । शरीरमा क्यान्सरको सुरुवाति चरणमै पत्ता लाग्यो भने यसको उपचार सम्भव छ । तर, पुरानो भइसकेपछि उपचार निकै कठिन र असम्भवसमेत हुन सक्छ ।त्यसो त क्यान्सरका थुपै कारण हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैली र खानपिन नै हो । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
जिवित रहँदासम्म हाम्रो शरीरमा जीवन सम्वन्धी कयौं क्रियाहरु चलिरहन्छन् । यसैमध्ये एउटा क्रिया कोशिकाहरु अर्थात् सेल्स बन्नु हो । यो क्रियामा शरीरका पुराना र मृत कोशिकाहरु आफै नष्ट भइरहन्छन् तर तिनको स्थानमा नयाँ कोशिकाहरु बनिरहन्छन् । यो प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा सँधै चलिरहन्छ ।
तर, क्यान्सर भएको अवस्थामा शरीरमा रेड ब्लड सेल्स र ह्वाइट ब्लड सेल्स अनावश्यकरुपमा बढ्न थाल्छ । यी क्यान्सरका कोशिकाहरु बिस्तारै-बिस्तारै शरीरमा फैलिन्छन् र स्वस्थ कोशिकाहरुको काममा पनि बाधा पुग्छ । यीनै रोगी कोशिकाहरुलाई क्यान्सर भनिन्छ ।
हाम्रो शरीरमा पनि कम्प्युटरमा जस्तै धेरै प्रकारका कोडिङ हुन्छन्, जुन जिनको माध्यमबाट हाम्रो बुवाआमाद्वारा हाम्रो शरीरमा आउँछन् । चुरोट, सुर्ति, नशालु पदार्थ तथा गलत खानपानको कारणले हाम्रो कोशिकाहरुको जेनेटिक कोड बदलिन्छ र यही हाम्रो शरीरमा क्यान्सरको कारण बन्छ । त्यसैले क्यान्सरबाट बच्न हाम्रो जीवनशैलीमा अलिकति परिवर्तन आवश्यक छ ।
कुनै पनि प्रकारको क्यान्सरको खतरा सुर्ति खाने तथा चुरोट पिउने व्यक्तिहरुमा अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगबाट बच्नु छ भने सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ ।चुरोट पिउँदा फोक्सोको क्यान्सर, किड्नीको क्यान्सर ब्ल्याडरको क्यान्सर र गर्भाशयको क्यान्सर हुन सक्छ । सुर्ति र गुट्खा खाँदा मुख र पाचन ग्रन्थिमा क्यान्सर हुन सक्छ । क्यान्सरमा ९० प्रतिशत घटनामा यसको सबैभन्दा ठूलो कारण चुरोट वा सुर्ति नै रहेको पाइएको छ ।
बिडी वा चुरोट : बिंडी वा चुरोट पिउँदा शरीरमा क्यान्सर उत्पादक तत्व प्रवेश गर्छन् । यी तत्वले स्वस्थ कोशिकाहरुलाई रोगी कोशिकाहरुमा बदलिदिन्छन् र यही कोशिकाहरु क्यान्सरमा परिणत हुन्छन् ।
चुरोट वा बिँडी सेवन नगर्ने तर अरुले फालेको धुवाँको सम्पर्कमा निरन्तर बसिन्छ भने पनि खतरा त्यत्तिकै हुन्छ जति पिउने व्यक्तिलाई ।
शरीरको वजन अनियन्त्रितरुपमा बढ्नु पनि क्यान्सर र यस्ता कैयन गम्भीर रोगको कारण हुन सक्छ । वजनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि तपाईंले हरेक दिन शारीरिक परिश्रम गर्नु आवश्यक छ ।
दिनभरी एकै ठाउँमा बसेर काम गरिन्छ भने बिहान वा बेलुका समय निकालेर आधा घन्टा ब्यायाम गर्ने गरौं । शरीरको फिटनेसकालागि यो आवश्यक छ कि जति क्यालोरी खानामा लिइन्छ, त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ, अन्यथा शरीरमा बोसो जम्न थाल्छ र मोटोपना बढ्न थाल्छ । मोटोपनाको कारणले मूत्राशयको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, गर्भाशयको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर आदिको खतरा बढेर जान्छ ।
शरीरलाई रोगबाट बचाउनका लागि, फिटनेसका लागि र दिनभर कामका लागि आवश्यक उर्जा पाउन पौष्टिक आहार आवश्यक हुन्छ । पौष्टिक आहारको अर्थ फल, सागपात, दूध, अन्डा र ड्राइ प|mुट्स हो । यसका अलावा पनि खाने हो, त्यसको गुणस्तर र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ ।
घरमा प्रयोग हुने तेल, मसला र रासनको गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । फलफुल खरिद गर्दा तिनीहरुलाई पकाउनका लागि कुनै केमिकल प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुस । मिसावटयुक्त र केमिकलयुक्त दूध तथा यसबाट बनेको पनिर, मिठाई र व्यञ्जनको प्रयोगले पनि शरीरलाई कयौं प्रकारले नोक्सानी पुर्‍याउँछ । खानामा बढिभन्दा बढि गेडागुडी र दालको प्रयोग गरौं ।
शरीरका लागि आवश्यकताभन्दा बडि अल्कोहल खतरानक हुन्छ र यसले क्यान्सरको पनि खतरा उत्पन्न गर्छ । अल्कोहल बढि मात्रामा लामो समयसम्म सेवन गर्दा फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र गुदा क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले अल्कोहलको सेवन आजैबाट त्यागौं ।